स्वास्थ्य/विशेष – Page 2
April 4, 2019 Spnews Comments Off on तपाईको पसिना गन्हाउछ ? भुलेर पनि नखानुस् यी ६ खानेकुरा
धेरै मानिसहरुमा काखी वा शरिरको विभिन्न ठाँउमा आएको पसिना गन्हानउने समस्या हुन्छ । जसले गर्दा टाढाको बाटो हिड्दा होस् या सामान्य काम गर्दा गदै हामी साथीहरुबाट अपहेलित हुन्छौ । त्यसैले धेरै मानिसहरु गर्मीको मौसममा सेन्ट […]
April 4, 2019 Spnews Comments Off on अमला खाँदा यसरि बढ्छ यौनशक्ति, यस्ता छन् अमलाका गुणहरू
अमला भिटामिनको राम्रो स्रोत भएको एउटा फल हो । भनिन्छ, ३ वटा सुन्तलामा भन्दा १ वटा अमलामा धेरै भिटामिन हुन्छ र अमलाको रुखको फेदमा छायाँमा बसेर खानाले मात्रै पनि अनेक रोगहरू निको हुन्छन् । अमलामा […]
April 2, 2019 Spnews Comments Off on के तपाई फलफूलका बोक्रा फाल्नुहुन्छ ? नफाल्नुस जसले सुन्दरतामा निखार ल्याउँछ
फलफुल मानव शरिरमा पाेषक तत्व दिलाउने आहारमा पर्दछ । यसले हाम्रो शरीरलाई चाहिने भिटामिन उब्लब्ध गराउनुको साथै अनुहारमा चमक ल्याउन सहयोग गर्दछ । फलफुल खाएपछि हामी त्यसको बोक्रालाई फोहरमा मिल्काई दिन्छौ किनकी हामीलाई यसको फाईदाबारे […]
सुगर रोगबाट मुक्त हुने एकमात्र अचुक ओखती बेल, शेयर गरि अरुलाई पनि जानकारी गराउनुहोस !
March 27, 2019 Spnews Comments Off on सुगर रोगबाट मुक्त हुने एकमात्र अचुक ओखती बेल, शेयर गरि अरुलाई पनि जानकारी गराउनुहोस !
मधुमेह अर्थात सुगर रोग शरिरमा गुलियोको मात्रा बढि भएपछि लाग्ने गर्छ । अब चिन्ता नलिनुहोस् घरमा नै सजिलैसँग तपाईँको सुगर रोग ठिक पार्न सक्नुहुन्छ । यदि गुलियो चिजहरूको सेवनका कारण तपाईलाई मधुमेहले पीडित बनाएको हो […]
एक महिनासम्म दैनिक अंगुर खाँदा हुने ७ फाइदाहरु जानुहोस,
March 25, 2019 Spnews Comments Off on एक महिनासम्म दैनिक अंगुर खाँदा हुने ७ फाइदाहरु जानुहोस,
अंगुरमा पौष्टिक तत्वले भरपुर हुन्छ । यसमा पोटासियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन ए, भिटामिन सी, क्याल्सियम, आइरन, भिटामिन बीसिक्स र म्याग्नेसियम प्रचुर मात्रामा पाइन्छन् । यदि तपाईंले एक महिनासम्म दैनिक अंगुरको सेवन गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको […]
मृगौला रोगी हुनुबाट बच्न यी ७ उपाय अपनाउनुस् ,
March 24, 2019 Spnews Comments Off on मृगौला रोगी हुनुबाट बच्न यी ७ उपाय अपनाउनुस् ,
एक घातक मृगौला रोग हो । पछिल्लो समय नेपालमा पनि मृगौलाको रोगीहरु बढ्नेक्रम जारी छ । जुन रोगले धेरै नेपालीहरुको अकालमै ज्यान गइरहेको छ । हामीले दैनिक जीवनका खाइने खानेकुरा र विभिन्न क्रियाकलापहरुमा ध्यान नदिदाँ […]
लिंग उत्तेजित हुँदैन ? वैज्ञानिकका अनुसार अब माकुराको टोकाईले यसरी हुन्छ घण्टौंसम्म उत्तेजित
March 23, 2019 Spnews Comments Off on लिंग उत्तेजित हुँदैन ? वैज्ञानिकका अनुसार अब माकुराको टोकाईले यसरी हुन्छ घण्टौंसम्म उत्तेजित
संसारभरिका करोडौं मानिसलाई चिन्ता र चासोमा पार्ने तर सार्वजनिक रुपमा भन्न नसक्ने वा मन नपराउने वा भन्न नहुने भनी बर्जित गरिएको एउटा यौन समस्या छ, जसलाई अंग्रेजी भाषामा Erectile dysfunction (ED) भनिन्छ । त्यसलाई नेपालीमा […]
March 23, 2019 Spnews Comments Off on अमृत हो तीते करेला: खाएको एक हप्तामै यसरी निको पार्छ भयानक रोगहरु
थाहा पाउनुस् करेलाका फाइदाहरुः – खानामा रुचि बढाउँछ । – छालाको सङ्क्रमण, चिलाउने खटिरा, घाउ आदिलाई हटाउँछ । – खाएको कुरा राम्ररी पचाउँछ । – पेटसफा राख्दछ । – कब्जियत हुन दिँदैन । – पेटसम्बन्धी […]
शरीरमा पानीको कमीले देखिने यी हुन् ७ समस्या, जानिरखौ
March 23, 2019 Spnews Comments Off on शरीरमा पानीको कमीले देखिने यी हुन् ७ समस्या, जानिरखौ
करिब ७० प्रतिशत मानव शरीर पानीबाट नै बनेको हुन्छ । स्वस्थ रहन शरीरमा पानीको मात्रा कायम राख्न आवश्यक छ । यद्यपि, शरीरमा विभिन्न कारणले पानीको कमी हुन्छ । शरीरमा पानीको कमीले देखिने यी हुन् ७ […]
March 22, 2019 Spnews Comments Off on कसरी हटाउने अनुहारको कालो पोतो ? हटाउने विधि सहित
छाला कालो, खस्रो हुनु विभिन्न किसिमका फोका, दाग, घाउ आउनुलाई छालाको समस्या वा रोग भनिन्छ । छालाको रंग चम्किलो खालको हुन्छ । स्वस्थ छाला र अस्वस्थ छाला राम्ररी चिन्न सकिन्छ । महिलामा छालाको विषेश महत्व हुन्छ […]